Top Ads on METRO Wholesale Myanmar | Home
Website URL: metro-wholesale.com
Website URL: 327434397722853
METRO Wholesale Myanmar မှာ ပြည်တွင်းအပြင် နိုင်ငံတကာမှတင်သွင်းထားတဲ့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ခုပဲဝယ်ယူရအောင်။ ဒီနေ့ဝယ် မနက်ဖြန် အရောက်ပို့ဆောင်ပေးလျက်လည်းရှိပါတယ်။ အခုပဲ အောက်ပါ link မှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ Register here now > https://bit.ly/35z5fhJ For more info > 09 969992332, 09 977203020
Headline: ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်နေ့အထိ METRO မှာဘယ်လောက်ဖိုးပဲဝယ်ဝယ် အိမ်အရောက်အခမဲ့ပို့ပေးနေပြီနော်... အထူးဈေးနူန်းတွေရှိနေတဲ့အပြင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏ မရှိဘဲ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာပါ..... အပြင်ထွက်ပြီးဈေးဝယ်ရမှာမအားလပ်တဲ့ လူကြီးမင်းတို့အတွက်လည်း အချိန်မကုန် လူမပင်ပန်းစေတဲ့ METRO website မှ တစ်ဆင့်အော်ဒါမှာယူလို့ရပါတယ်.. Register here now > https://bit.ly/3eVxc7i For more info > 09 969992332, 09 977203020
ဝယ်ယူသူအဖြစ် အခုပဲစာရင်းသွင်းပြီး METROဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ အပ်ပလီကေးရှင်းမှ တဆင့်အော်ဒါမှာယူခြင်းဖြင့် ၁၀%လျှော့ဈေးကိုရယူကြမယ်! အနည်းဆုံးဝယ်ယူရမည့်ပမာဏ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ပရိုမိုကုဒ် - MTRNEW010ကိုသုံးပြီး ၁၀% လျှော့ဈေးကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရန်>https://bit.ly/2JfZuyD METRO appရယူရန်: Download Android : https://bit.ly/3h0OO1W Download iOS : https://apple.co/2OtMPqA အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀၉၉၆၉၉၉၂၃၃၂၊ ၀၉၉၇၇၂၀၃၀၂၀ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Sign up now and get 10% off your first order! Use promo code MTRNEW010 with no minimum purchase required. Offer is only applicable to our home consumers. All orders must be made through our website or app. Shop Now > https://bit.ly/2JfZuyD Get the new METRO app here: Download Android : https://bit.ly/3h0OO1W Download iOS : https://apple.co/2OtMPqA For more info: Call to +959977203020 , +959 969992332
Website URL: com.metro.ecommerce3
Website URL: metro-wholesale.com.mm
Headline: We've got discounts in-store! Enjoy special #METRO offers on fresh goods, grocery items, and household products every Wednesday of the month. Visit the METRO website or download the app to start your #NewWayOfShopping!
Shop via Website: https://bit.ly/2Ng8Ags
Shop via Android App: https://bit.ly/3h0OO1W
Shop via iOS App: https://apple.co/2OtMPqA
Call for more info: +959977203020 / +959 969992332
Headline: We've got discounts in-store! Save on your shopping every Wednesday with #METRO. Enjoy special offers on fresh goods, grocery items, and household products. Visit the METRO website or download the app to start your #NewWayOfShopping! Shop via Website: https://bit.ly/2Ng8Ags Shop via Android App: https://bit.ly/3h0OO1W Shop via iOS App: https://apple.co/2OtMPqA Call for more info: +959977203020 / +959 969992332
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကျန်းမာလုံခြုံမှု က METRO အတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းသောပစ္စည်းများကို အမြဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် METRO မှ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ကျန်းမာရေးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အိမ်မှာပဲ ဘေးကင်းစွာနေပါ။ METRO က သင့်အတွက် အမြဲရှိနေပေးမှာပါ။ ဝယ်ယူရန် > https://bit.ly/32C1tnU METRO app ရယူရန်: Download Android : https://bit.ly/3h0OO1W Download iOS : https://apple.co/2OtMPqA အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀၉ ၉၆၉၉၉၂၃၃၂၊ ၀၉ ၉၇၇၂၀၃၀၂၀ ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ At Metro, your safety comes first. That’s why we’ve enhanced safety measures across our operations, ensuring you still get the same freshness and quality without leaving your home. Shop Now > https://bit.ly/32C1tnU Get the new METRO app here: Download Android : https://bit.ly/3h0OO1W Download iOS : https://apple.co/2OtMPqA For more info: Call to +959977203020 , +959 969992332
Website URL: 1513392772
METRO ရဲ့ customer ဖြစ်ဖို့ အခုပဲ register လုပ်ကြစို့! ယခုလို စိန်ခေါ်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို အခက်အခဲမရှိ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်စေရန် ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီး ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် Website မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ အိမ်အရှေ့အရောက်လာပို့ပေးတာမို့ လိုအပ်တာ မှန်သမျှ METRO မှာဝယ်လိုက်ရအောင်။ Register here now > https://bit.ly/3dEDs1S For more info > 09 969992332, 09 977203020
Headline: Times have been tough, and METRO is committed to serving our customers when you truly need us. We would like to hear from you through this short but helpful survey. Stay Safe, Myanmar.
အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အမြဲထပ်တူရှိဖို့ METRO က အစဉ်ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဝယ်ယူသူများရဲ့လိုအပ်ချက်ကို အောက်ပါဗွီဒီယိုမှာ ဖြေဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။​ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအားလုံး လုံခြုံဘေးကင်းပါစေ။